J: August 2007
ီစုတယ် စုတယ် ၄ယောက်ပိုပြီး စုတယ်
ဘာဖြစ်လဲ........... ဘာဖြစ်လဲ .....
ကလေးဘ၀က ဒီလို ဖြစ်ခဲ့ဘူးသလား....
ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်ပုံထဲက တယောက်များ ဖြစ်နေလေသလား
Reference: funmuch.com, pyzam.com
Food - Ya Da Yar (စိမ်လုံး သိကြားယတြာ ) ပြည်မလိုင်လုံး
သိကြားမင်းအား မိမိအား မတွန်းလှန်နိုင်ရန်၊ ကိုယ့်လက်ထဲတွင် ထားသလို နေရန်၊ သိကြားအစွမ်း အား စုပေါင်းထိန်းချုပ်ရန် ထွေးလုံးချုပ်ထားရန် ပြင်ဆင်ထားရပါမည်။
- ဂျုံမှုန့်၎ပုံ ၁ပုံ ခွက်
- နွားနို့၎ပုံ ၁ပုံ ခွက်
- ထောပတ် ၃ဇွန်း
- သိကြား (သို့ ) သကြား ၁ခွက် (အချိုကို စိတ်ကြိုက်ထဲ့ပါ)
နို့ မှုန့် ၊ဂျုံမှုန့် ၊ ဘတ်ကင်ဆိုဒါ ရှိသမျှ အမှုန့် များကို ရောပေါင်းမွှေနှောက် ရပါမည်။ ပြီးလျှင် အုပ်ထားပါ။ (သိကြားအား အမှုန့် ဖြစ်စေရန် အစွမ်းရှိသော တံခိုးများ၊ အစွမ်းမရှိသော တံခိုးများ အား ရောသမ မွှေခြင်းအဓိပါယ် ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ထား ရခြင်းမှာ ထွက်မပြေးရန်ဖြစ်ပါသည်)
ပြီးလျှင် ခပ်နွေးနွေး ဖြစ်သော နွားနို့ ရောမွှေပြီး ၁၀မိနစ်ခန့်အုပ်ထားရပါမည်။ (စနေနံကို အုပ်မိအောင် ဖြစ်ပါသည်)
သကြားကို ကြိုထားရပါသည် (သိကြားကို အရေကြိုသည်ဟု စိတ်ထဲတွင်ထား ရပါသည်)။
ထိုအတောအတွင်း ရောမွှေထား သော မုန့် ဖတ်ကို စိန်လုံးပြူးအရွယ် (စိန်စီသောည) လုံးရပါမည်။ (သိကြားမင်း၏ အစွမ်းများအား လက်ဖြင့် ဖျစ်ညှစ်လုံးချေ နိုင်သည်ဟု သဘောထား ရပါမည်)
မီးဖို တွင် ဆီအိုးကို အပူရှိန် အသင့်တင့် (မီးအေးအေး အပူရှိန်) ဖြင့် တည်ထားပါ။
စိန်လုံးမုန့် ဖတ်များကို ဆီထဲတွင် မီးအေးအေးဖြင့် ညိုလာသည်အထိ လှိမ့်ပေးပြီး ကြော်ရပါမည်။ (သိကြားအလှိမ့်ခံရသည်ဟု သဘောထားပါ)
နီရဲညိုလာသောအခါ သကြားရည်ထဲတွင် စိမ်ထားရပါမည်။
ယတြာ သည် မပြီးသေးပါ။ ပါးစပ်ထဲ စိစိ ညက်ညက် ကြေအောင် ၀ါးစားပြီးမှသာ အောင်မြင်ခြင်း အဆင့်သို့ရောက်ပါမည်။ ပထမဆုံးစားသော အလုံးမှာ ညဘက် ဖြစ်ရပါမည်။ သို့ မှသာ စိမ်စီသောည စိမ်လုံးသိကြားယတြာ အောင်မြင်ပါမည်။
တချို့ ကအမည် အမျိုးမျိုးပေးကြပါသည် ပြည်မလိုင်လုံးဟု၎င်း (လေးမ၏ ပဋ္ဋိက္ခရား) ကုလားပြည်က Gulajab ဟု၎င်း ဘလော့ကာများက စိမ်စီသောည စိမ်လုံးသိကြားယတြာဟု ခေါ်ကြောင်း သိကြားယတြာခြေနည်း ကို အခမဲ့ ပို့့ချ လိုက်ရ ပါသည်။
ယတြာချေရာတွင် ပြင်ဆင်မှု့ အဆင့် လုပ်ဆောင်မှု့ အဆင့်များ မလုပ်ဘဲ ဈေးထဲမှ အဆင်သင့်ဝယ်ပြီး နောက်ဆုံးယတြာအဆင့်ကို ချေပါက ဘေးဆိုးနံကြပ် တွေ့ မည်။ (ချောင်းဆိုးမည်)
ဓါတ်ဆင် ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်သဘောများ ကို မသွေဖယ်ဘဲ ယတြာအဆင့်ဆင့်ကို တိကျစွာ ယုံကြည်မှု့ အပြည့်ဖြင့် လိုက်နာပါက အောင်မြင်မည်။ လူချစ်လူခင် ပေါမည်။(နောက်ထပ် မကြာခဏ ယတြာချေခိုင်းလိမ့်မည်)
(မှတ်ချက် - ပျော်ရွှင် ပြုံးပျော်ရေး စိတ်ဖြင့်ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သိကြားမင်းအား ကာယကံ ၀ဇီကံ မနောကံဖြင့် ပစ်မှားသည်ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။)
ဓါတ်ဆီဈေး မှာ လူမသိသူမသိ ဘ၀မှ ကုန်ဈေးနှုန်း နှင့်အတူ တဖြည်းဖြည်း အင်အား ကြီးထွား တိုးတက် မြင့်မား လာခဲ့သည်။ ထို့ အတွက် ကြောင့် သာကီဝင် မြန်မာ နိုင်ငံသား များ အနေဖြင့် သူ၏ ဘုန်းတံခိုးကို ထောက်ရှု့ သောအားဖြင့် ဓလေ့ထုံးစံကို လျှော့ချခဲ့ကြရသည်။ ယခင်က ဆွေမျိုး သားချင်းများဆီ၎င်း သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ များဆီသို့ ၎င်း အားလပ်သော ညနေခင်းများ ကို ကြည်နုးသာယာစွာ ဖြတ်ကျော်ခဲ့သော သာကီဝင် မြန်မာ နိုင်ငံသားများ၏ ထုံးစံမှာ ယခုဆိုလျှင် အလျှူမင်္ဂလာများကိုပင် သွားရောက်ရန် စဉ်းစား လာရသည်။ အကျွေးအမွေးပေါ်မူတည်ပြီး အလျှု မင်္ဂလာ အခင်း ထက် လမ်းခရီးစရိတ်က ပိုကြီးသည် ဆိုကာ အားမတန်မာန်ချ လက်လျော့ခဲ့ ရလာ တော့သည်။
မဖြစ်မနေ သွားရမည့် နေရာသို့ သာ စီးတော်ယဉ် ဘတ်စ်ကားဖြင့် သွားလာနေရသော သာကီဝင်များ၏ ဧချမ်းသာယာ လှသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကုန်ဈေးနန်း မှာ ရုတ်တရက် နေ့ ချင်းညချင်း တိုးတက်ကာ စံချိန်သစ်တင် သွားခဲ့သည်။ တရားဝင်သတ်မှတ်သော ဓါတ်ဆီဈေးမှာ မိုးသို့ ခေါင်ခိုက်သဖြင့် လူအများ အားထား နေရသော (ကွယ်ရာ) အမှန်ကန်ဖြစ်သော ဓါတ်ဆီဈေးမှာ မိုးကို ဖောက်ထွင်းပြီး သကာလ သိကြားမင်းတိုင်းပြည်သို့ ဝင်ရောက်ကျုးကျော်သွားလေသည်။ တဖက်လျှင် အပါး ၅၀၀မျှသော လှပလွန်းသော မော်ဒယ် နတ်သမီးများ အနေဖြင့် နိက်ကလပ် ခေါ်သည့် ညဘက် စားသောက်ဆိုင်သို့ သွားပြီးကိုယ်ဟန်ပြကာ ခေတ်ပေါ် ကျောဗလာ အရှေ့ခြမ်း လက်တထွာ တပိုင်းစာ ရှိသည့် င်္အကျီဝယ် ၀တ်လာ နိုင်မည့် အနွရယ် ရန်စွယ် အမျိုးမျိုး ကြောင့် သိကြားမင်းမှာ အလွန် စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်နေရ လေသည်။
ထိုအခါ သိကြားမင်းတိုင်းပြည်မှ ပိုမြင့်သော နေရာရှိ အစွမ်းပိုထက်သော ဗြဟ္မာမင်းကြီး မှာ လွန်စွာ စိုးရိမ်ထိပ်လန့် နေရလေသည်။ ထိုအခါ ကယ်တင်ရှင်များ ပေါ်ပေါက်ရန် တိမ်လွှာ ကိုဖောက် အလင်းရောင်ဖြန့် ကာကြည့်လိုက်သောသကာလ..
သကောင့်သား ဓါတ်ဆီဈေးများ ကို အံတုကာ သိကြားမင်း ဗြဟ္မာမင်းတို့ အား ကယ်တင်နိုင်မည့် သတ၀ါကို တွေ့ လိုက်ရပေသည်။ ယင်း၏အစွမ်းမှာ ဓါတ်ဆီဆိုင် မှ မန်နေဂျာများကို အံတုနိုင်စေသည်။ ယခင်ကလို အချိန်ကုန်ခံကာ တန်းစီရခြင်းကင်း စေသည်။
ထိုဆူပါသကောင့်သားမှာ နောက်ဆုံးပေါ်ထွင်လိုက်သော လျှပ်စစ်ဖြင့်မောင်းနိုင်သော ကားဖြစ်ပါသည်။
တနာရီလျှင် ၁၃၀မိုင်နှန်း ဖြင့် မီးခိုးမထွက် ဓါတ်ဆီ တန်းစီရန် အချိန် မကြန့်ကြာစေသော လျှပ်စစ်ကား လေးမှာ အားသွင်း နိုင်သော ဘက်ထရီ၃၀လုံး ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ပေါင်စတာလင် ၁၅၀၀၀၀ မျှသာ တန်ဖိုး ရှိပါသည်။
လမ်းပိတ်မှုအခွန် လမ်းအခွန်ကင်းလွတ် ပြီး ၇၀၀မြင်းကောင်ရေအား ရှိပြီး ဖီးယက်ကား ၏ ၇ဆနှင့် ညီမျှသည်။ ဘက်ထရီတလုံးလျှင် ၉လက်မအရှည်ရှိပြီး ၂၅၀မိုင် မောင်း နိုင်သည်။ ၁၂ပေရှည်သော ၀ါယာကြိုးဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး ၁၀မိနစ် အတွင်း အားသွင်း နိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်း မှာ ၁၂နစ်မျှ ကြာရှည် ခံမည် ဟု သိရသည်။တချို့ ကားဘက်ထရီမှာ အားကျမည်ဆိုပါက ပြန်လည်အားသွင်းရန် ဘရိတ်သော့ ပြန်လွှတ် သည့်အခါတွင်ရရှိလာသော ပွတ်တိုက်မှု လျော့ပါးမှုသော စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု ထား သောကြောင့် သွားနေစဉ် ဘက်ထရီအားကုန်သွားခြင်းမှ ကာကွယ် နိုင်ပါသည်။ ဂီယာ မပါဝင် သဖြင့် နေရာပိုကျယ်လာသလို လျှပ်စစ်စွမ်းအားမှာ တသတ်မတ်တည်း ရှိပေသည်။
ပေ့ါပါးသော ပြိုင်ကားပုံဖြစ်ပြီး ကွေ့ မောင်း ၀ိုက်မောင်း လှည့်မောင်း ရာတွင် အခက်ခဲ မဖြစ်နိုင်ရန် ရာတွင် လည်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်သည့် စံနစ်၊ လျှပ်စစ်အားသုံးတံခါး အလင်း မီးသီးပါရှိသည်။
ကားသည် လျှပ်စစ်မော်တာ၎လုံးဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး ကားဘီးမှာ ၂၀လက်မပတ်လည် ရှိပါသည်။ ကားထိုင်ခုံမှာ တစစီဖြုတ်တပ်ဆင်နိုင်သည့် အပိုင်း၂ခုပါဝင်သည်။ လမ်းပြ ဆက်တလိုက် ဂြိုလ်တုစံနစ် ထဲ့သွင်း တည်ဆောက် ထားပြီး အိုင်ပေ့ါ စက် တပ်ဆင် နိုင်သော ထောက်ခုံ ပါရှိသည်။ ကားဘောဒီမှာ ပျားအုံပုံစံ အလူမီနီယမ် ကိုယ်ထည် ဖြင့် ဖော်မြူလာ ၀မ်း ကားပုံစံမျိုး တည်ဆောက် ထားပါသည်။
ထိုသို့ သော အထူးကိရိယာများဖြင့် အထူး တပ်ဆင်ထားသော အထူး လျှပ်စစ်ကားလေး မှာ အထူးခြားဆုံး ပုဂိုလ်ဖြစ်သည့် ဗြဟ္မာမင်း သိကြားမင်းတို့ အတွက် အထူး သင့်လျော်အောင် အထူး တည်ဆောက် ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုထိုသော အစွမ်းပကားဖြင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဓါတ်အားသုံး ဆူပါသကောင့်သား အမည်မှာ အလင်းတန်း lightening ဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှ နိုင်ငံ ပီတာဗိုရောက်ကုမဏီ Peterborough-based Lightning Car Company မှ ယခုနစ် နစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင် စမ်းသပ် မောင်းနှင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဗြဟ္မာမင်းမှာ မြန်မာပြည် ကားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လျောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဆူပါသကောင့်သားကို ၀ယ်လိုသူများ ဗြဟ္မာမင်းထံ စာရင်း ပေးနိုင် ကြောင်း သိရ၏။
(မှတ်ချက် ကောင်းကျိုး - လောင်စာဆီသက်သာမည်။ ဆိုးကျိုး- မီးမလာသောကြောင့် ဓါတ်အားသွင်းရန် ခက်ခဲမည်။)
(Extracted from England newspapers 16 August 2007)
တဲကုပ်လေးတွင်နေသော အဖွားအိုတဦးမှာ ခရီးထွက်ရန်ရှိသဖြင့် သူမ၏ နေအိမ်ကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူမည့် သူများအား ကြိုတင်တောင်းပန်သည့် အနေဖြင့် အိမ်အ၀င်ဝ တွင် စာရေးထားခဲ့သည်။ သူမအိမ်ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမပြုပါရန် အလိုရှိပါက အိမ် တံခါးဝတွင်ထားပေးခဲ့သော စည်သွပ်ဗူးများကို စိတ်ကြိုက် စားသောက်ပါရန်ရေးခဲ့သည်။ ဖောက်ထွင်းဝိဇာများက အိမ်တံခါးဝတွင် ထားခဲ့သော စည်သွပ်ဗူးများ ဖွင့်စားရာတွင် အလွန်အရသာ ရှိကြောင်းသိရရ်ျ မတင်းတိမ်နိုင်ဘဲ အိမ်တွင်းသို့ ဖောက်ထွင်း ၀င်ရောက် ကာ သခွားသီး ဟင်းရွက်များနှင့် ၀က်အူချောင်းများကို ထပ်မံ စားသောက်ယူငင် သွား ကြသည်။ တဲပိုင်ရှင်များမှာ ရုံးအားရက်များတွင်သာ ပြန်လည် နေထိုင်သောကြောင့် ဂျာမဏီရှိ နွေရာသီတဲ လေးများတွင် ဖောက်ထွင်းဝိဇာများ စိုးမိုးနေသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ် နေသည်။
သေခြင်းကို ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ခွေးကလေး စကင့်ပ်
ကြောင်ကလေး အော်စကာကဲ့သို့ သေခြင်းကို ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော အမေရိကန် အိုဟိုင်းရို ရှိ Rhode Island Nursing home ဘိုးဘွား စောင့်ရှောက်ရေးဌာန မှ ခွေးကလေး စကင့်ပ် သည် လွန်ခဲ့သော ၃နှစ်မှစပြီး အသက်ဆုံးခါနီးလူနာများကို ကြိုတင် မှန်းဆ နိုင်သည်ဟု ပိုင်ရှင် Deirdre Huth ကပြောကြားခဲ့သည်။ အကြိမ်ပေါင်း ၄၀ခန့် တိကျစွာ မှန်းဆနိုင်သည်။ အကယ်ရ်ျ လူနာမှာ ပုံမှန်မဟုတ်လျှင် ဟောင်ရ်ျ ပုံမှန် သေဆုံးမည့် လူနာ ဖြစ်လျှင် တိတ်ဆိတ်စွာ လူနာအနားတွင် လှည့်ပတ်ကာ သေဆုံး သည့် အချိန်ထိနေ နေသည်။
မက်ဒေါနာဘာဂါဆိုင်ကို ၁၇နစ်တိုင်တိုင် တနေ့ မပြတ်လှူဒါန်းနေသော စုံတွဲ မှာ ၂ထပ် ဘာ၈ါ အာလူးကြော် နှင့် ကာဖီနေ့ လည်စာ တမျိုးတည်း ကိုနေ့ စဉ် မပြောင်းလဲဘဲ စားသော Lee and Mary Humphrey ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် မက်ဒေါနာ စားသောက်ဆိုင်မှ စားပြီး လျှင် မည်သည့် အစာကိုမျှ များစွမစားပါ နေ့ စဉ်၃မိုင်ခန့် လမ်းလျှောက်သဖြင့် ရောဂါကင်း ကျန်းမာ ကြသည်။ ၁၇နစ်စာ ပေါင် ၂၀၀၀၀ ကျော် မက်ဒေါနာဘာဂါဆိုင်ကို လှူဒါန်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(Extracted from England newspapers 14 August 2007)
- တာဝန်နှင့်ဝတရား . ဒုတိယထောင်မှုး Charlotte Moore, (36 နှစ်)သည် တာဝန် ပြင်ပအချိန်တွင် အရက်သောက်ရ်ျ ကားမောင်းမှု့ ဖြင့် သူမ၏ ခင်ပွန်းသည် ယဉ်ထိန်းရဲ က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
- ဘေးကပုံကတော့ အိမ်ယာမဲ့ လူတယောက် ပွဲတော်နေ့ မှာ လမ်းပေါ်မှာ အထူးအဆန်း လုပ်တဲ့ပုံ ပေ့ါ။
- အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပုလိပ်ကို မကျေနပ်သည်ကို တိုင်တန်းရ်ျ အကူညီ တောင်းလေ့ ရှိကြသည်။ ဂျော်ဂျီယာနယ်မှ Juanita Marie Jones ဆိုသူသည် ဒေါ်လာ၂၀ဖြင့် ၀ယ် လာသော ကိုကင်းမှာ အတု ဖြစ်နေသဖြင့် မကျေနပ်ဘဲ အစစ်ရလိုမှု့ဖြင့် ပုလိပ်ကို ဖုံးဆက် ပြီး ကိုကင်းအစစ် ရနိုင်ရန် ပုလိပ်များ ကူညီစေ လိုကြောင်း ပြောကြားရာမှ ပုလိပ်များ ခြေရာခံမိပြီး ယင်းအမျိုးသမီးမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ကိုင်ဆောင်မှု့ဖြင့် အဖမ်းခံ ရလေသည်။
- ယနေ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကာဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီး ကာဖီအသောက်လွန်လို့ သေလုမျှောပါး ခံစားလိုက်ရခြင်း။ သူသည် ကာဖီအပြင်းစား Double Espresso ကို ၇ခွက်သောက် မိပြီးသော အခါ ချွေးစေးများထွက်ခြင်း ဗိုက်တွင်းတွင် မခံရပ်နိုင်အောင် နာခြင်း ရင်တုန်ခြင်း အသက်ရှု ကြပ်ခြင်း နားတွင်းမှ လေထွက်ခြင်းဖြစ်ကာ ဆိုင်အတွင်းတွင် မူးဝေ နေသဖြင့် ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်တင်လိုက်ရသည်။ ကာဖီကြိုက်သူများ ကာဖီ ခါးခါး များများ သောက်လျှင် အနွရယ်ရှိကြောင်း သတိပေးအပ် ပါသည်။
ဘီယာဗူးခွံကား ကိတ်မုန့် ကား အပြင်...
ကား၃စီးရှိတယ် ဘယ်ကားလိုချင်လဲ လေလံပစ်မယ်။
ဒီကား ကတော့ ကိတ်မုန့် ရယ် သကြားခဲတွေရယ် ဂျင်နဲ့ ပျားရည်တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စကိုဒါ ကားလေးပေ့ါ။
ဒီကားက ပုံမှန်ကားလေးပါ။ ကစားစရာကားမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီလူက ကမာပေါ်မှာ အရပ်ရှည်ဆုံး ၈ပေ ၅လက်မ မြင့်သူ ယူရခိန်းနိုင်ငံသား၊ သူ့ အရပ်ကြောင့် ကားလေးက သေးပြီး ကစားစရာထင်စရာဖြစ်နေတာ
တကယ်လားတော့မသိပါ youtube တွင်တွေ့ ရပါသည်။ (မက်ထရို ၁၁.၈.၂၀၀၇)
ခိုးရတာပင်ပန်းသွားရှာလို့ ခိုးရာပါပစည်းတွေကြားမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့သူခိုး
ဖောက်ထွင်းဝိဇာတဦးမှာ အိမ်တအိမ်တွင် ခက်ခဲစွာဝင်ရောက် မွှေနောက်ပြီး ညလုံးပေါက် ပစည်းများခိုးယူပြီး အိမ်ရှေ့ တွင်ရပ်ထားသော ကားဖြင့် ၄င်း၏ အိမ် အရောက် မောင်းပြန်လာနိုင်ခဲ့သော်လည်း သူခိုးခမျာမှာ ပင်ပန်းလွန်း သောကြောင့် ကားပေါ်တွင်ပင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။ နောက်တနေ့ မနက် တွင် လမ်းသွားလမ်းလာ တဦးက ကုမဏီကားနောက်ခန်းတွင် လူတဦး အိပ်နေကြောင်း ပုလိပ်ကို တိုင်ကြားရာ မှ ခိုးရာပါ ကား၊ ခိုးရာပါ ပစည်း နှင့် အတူ သူခိုးဝိဇာကို နာရီပိုင်းအတွင်း လက်ရဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့သည်။ ပုလိပ် က ဖောက်ထွင်းဝိဇာကို ပြောကြားလိုက်သည်မှာ.....
.... ခိုးနေချိန် မအိပ်သင့်ပါ......... တဲ့။ (မက်ထရို ၁၁.၈.၂၀၀၇)
ကျွဲရိုင်းအုပ်စုက ခြသေ့င်္အုပ်စုနဲ့ မိချောင်းရန်ကို ဖြိုဖျက်တာ ကြည့်ချင်ရင်.
အမေရိကနိုင်ငံsouth-east of Yakima မှ မိုင်၅၀အကွာတွင်Danny Anderson ဆိုသူသည် မြင်းအစာကျွေးနေစဉ် ၅ပေကျော်ရှိ ခလောက်မြွေဝင်လာသဖြင့် ဂေါ်ပြားဖြင့် ခေါင်းဖြတ် သတ်လိုက်သည်။ မြွေခေါင်းပြတ်မှာ ကားတံခါး အနီး အောက်ဖက်သို့ လွင့် ထွက် သွားသည်။ သူသည် ကားမောင်းရန် ကားအနီးရောက်သောအခါ ထိုမြွေ ခေါင်းပြတ် သည် ခုန်ရ်ျ သူ၏လက်ကို ကိုက်ခဲလိုက်သည်။ ထိုမြွေခေါင်းပြတ်ကို မနဲ လက်ခါချရ်ျ ဖယ်ထုတ်ရသည်။ ၁၀မိနစ်ခန့် ကြာသောအခါ အဆိပ်များပြန့် ကာ လျှာများ လေးလံလာလေသည်။ ဆေးရုံသို့ အမြန်ပြေးသော်လည်း ၂ရက်ကြာမျှ ဆေးကုသခွင့် ခံယူရလေသည်။ ထို့ ကြောင့် မြွေခေါင်းပြတ်ပင် ဖြစ်သော်လည်း အနွရယ် ရှိကြောင်း သတိပေးလိုက်ရပါသည်။
အကြံအဖန် လုပ်နိုင်သော ကွန်ပျူတာ ဓါတ်ပုံ ဆော့ဝဲလ်
ဓါတ်ပုံတွင် ပါသော ပုံကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ တခြားဓါတ်ပုံမှ တစိတ်တဒေသကို နောက်တခြား ပုံတွင် ထဲ့သွင်းခြင်းလုပ်နိုင်သော ဓါတ်ပုံ ဆော့ဝဲလ်ကြောင့် နောင် အခါတွင် ဓါတ်ပုံဖြင့် သက်သေပြမည်ကို ပင် မယုံကြည်နိုင်တော့ပါ။ ပြသနာများစွာ ရှိလာနိုင်ပါသည်။(ဒေးလီးမေး ၁၁ သြဂုတ် ၂၀၀၇)
Be itastray thumb orapasser-by blundering into shot, few holiday snaps turn out picture perfect. But help is at hand for even the most amateur of photographers in the form of two computer programs which claim to fix any ruined image within seconds.
It then selectsarange of pictures that can be blended on to the original photograph. Soastray thumb ruiningabeach shot could make way forabucket and spade, orabuilding blockingacoastline view be removed in favour of miles of glistening sea.
Above clockwise from left: the original photo witharooftop in the way, the roof is erased, the software checks 200 million images foragood match,anew image is created
To generate the clip art, the team at Carnegie Mellon University in Pennsylvania, which developed both programs, drew onaseries of online image libraries offering cut-outs of different objects. The software estimates the height of the camera used to take the picture by working out the distance between objects in the snap.
The light sources inascene are then worked out by looking at the distribution of colour shades within three broad regions; ground, vertical planes and sky. With knowledge about the position, pitch and height of the camera and light sources, it looks for images in the clip art database taken from similar positions.
The researchers say that although editing programs such as Photoshop already allow snaps to be tweaked and elements erased or replaced they are often time-consuming and the results unconvincing. Jean-Francois Lalonde, who headed the research, said: "Matching an object with the original photo and placing that object within the 3D landscape of the photo isahighly complex problem.
The success of the software depends on the number of photos available to scan, he added. Researcher James Hays said: "We sawadramatic improvement when we moved fromadatabase of 10,000 images to two million images.
"And that is justatiny fraction of the hundreds of millions of images already available on sites like Flickr. "We have tons of photos from which to choose."